Hong Kong: CCTVB Tsia! · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Emilie Schwartz
Voadika ny 12 Aogositra 2018 7:09 GMT
(Fanamarihana: lahatsorara anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2009)
Olona maherin'ny 150 000 no nivory tamin'ny 4 jona lasa teo tao Hong Kong, tao anatiny sy manodidina ny kianja Victoria mba hankalaza ny faha-20 taonan'ilay fandripahana tao Tiananmen tamin'ny 1989. Isa tena betsaka indrindra no voarakitra, izay nihoatra lavitra noho ny tamin'ireo fihetsiketsehana teo aloha hatramin'ny taona 1990, mampiseho amin'izao tontolo izao fa tsy nihataka tamin'ny fangatahany ny hanekena ny 4 jona 1989 ireo olona avy ao Hong Kong. Kanefa, maherin'ny antsasak'ireo gazety eo an-toerana sy ireo fantsona fahitalavitra izay tena malaza indrindra no nanapaka hevitra ny hanao tsinontsinona ilay hetsika.
Ny 5 jona, namerina namoaka ny sasany tamin'ireo lohatenin-gazety malaza indrindra teo an-toerana indray ny blaogy ESWN (Blog Atsinanana Atsimo Andrefana Avaratra). Tamin'ireo gazety shinoa 13, ny 4 monja tamin'ireo no nametraka ilay fisaonana nandrehetaka fanàla ho teo amin'ny pejy voalohany. Nataon'ny Headline News sy Sing Pao ho lohateny lehiben-dry zareo ny mikasika ny fahafatesan'ilay shinoa mpilalao antsehatra Sek Kin ; nanolotra tafatafa nifanaovana tamin'ilay ho Filoha Tale Jeneralin'ny tesnambolan'i Hong Kong ny Hong Kong Commercial Press sy ny Hong Kong Economic Journal – nasongadin'ny Sing Tao, Hong Kong Daily News, Oriental Daily sy ny The Sun ireo tantaran'ny kileman'ireo tanora – ny fidorohana rongony tafahoatra sy fivarotantena. Nanisy teboka mikasika ireo politikan'ny governemanta shinoa momba an'i Hong Kong i Wen Wei Po.
Eto ambany ireo lohateny lehibe tamin'ireo gazety efatra malaza (avy amin'ny ESWN):
Ny hazondamosin'i Shina, voalohany indrindra teoo amin'ny tantara: olona 200 000 no nankalaza tao anatin'ny alahelo an'ireo trangan-javatra tamin'ny 4 jona
Fahafatesan'i Sek Kin noho ny aretina nahazo azy
Li Xiaojia : tsy maintsy mizatra ny tsenan'i Hong Kong, araka ny voalazan'ireo shinoa mpampiasa vola
Mpianatra telo tsy nahatsiaro tena rehefa avy nidoroka kétamine tao anaty kianja
Ankoatra ny gazety an-tsoratra, ny fanaovana sivantena an'ireo fantsona fahitalavitra dia misy fiantraikany mivantana ao Hong Kong satria ny sehatry ny haino saika ahitana ampihimamba, noho ny politikan'ny famoahana ireo fahazoandalana ataon'ny governemanta. Hatramin'izao, tsy misy afatsy fantsona fahitalavitra roa ‘hertziennes’ sisa ao Hong Kong, TVB sy ny ATV, ary ny fantsona Television Broadcats Limited (TVB) dia manangona ho azy irery ny 80%-n'ireo mpijery. Tao anatin'ireo taona vitsivitsy, mihamaro ny feo niakatra mba hiampanga “ny fandrindràna” ny sampana filazambaovao an'ny TVB (fananganana ny sivantena).
Ny 4 jona, ny fiaretantory nandrehitra fanala no lohahevitra fahatelo ho an'ny vaovao tamin'ny fahitalavitra an'ny fantsona Jade (shinoa) an'ny TVB, izay nahatezitra marobe tamin'ireo mpijery fahitalavitra. Nandray fanapahankevitra ny olom-pirenena iray hanohitra ny sampana fampahalalambaovaon'ilay fantsona tamin'ny alalan'ny fametahana sary famantarana iray teo anoloan'ny fitaovana fakàna sary raha iny hanao tatitra iny indrindra ny mpanao gazety. Toy izao no nalefa tamin'ny YouTube:
Mivaky toy izao ny lamba misoratra:
Vaovaon'ny TVB, famokarana iray mamohehatra
Naneho hevitra mikasika ny fanadihadiana nataon'i TVB news tamin'ny 4 jona ny Erynnyes an'ny blaogy “those were the days”
Omaly, ny lohahevitra tena niverimberina indrindra angamba dia sady tsy ny isan'ny olona tonga tamin'ny fiaretantory tamin'ny 4 jona, no sady tsy ny fiainana manokan'iRichard Lee, fa ny lamba misoratra misy fanoherana hoe “vaovaon'ny TVB, famokarana iray mamohehatra” nasandratra nandritra ny fanadihadiana mivantana tao amin'ny CCTVB. Nilaza tamiko ny namako A. fa ny lehiben'ny departementa filazam-baovao CCTVB, Yuen Chi Wai, no tena rangitra tamin'ny zava-nitranga. Saingy araka izay voalazan'ny namako A. ihany, tsy afaka ny hanafangaro an'io aminà torabato avy any an-danitra isika, maneho safidy nataonà lehilahy tokana izy io. Na ho an'ireo olontsotra aza, mazava ho azy fa ataon'i Yuen Chi Wai tsinontsinona ny famoahana ireo tantaram-piainan'i Zhao Ziyang. Ny 4 jona, nakisaky ny CCTVB ho teo amin'ny toerana fahatelo ihany koa ilay hetsika.
Raha tiantsika ny hankatoavana ny 4 jona, tokony ho arovantsika ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. Raha tsy tafita isika, tsy misy dikany ny hiadiantsika ho amin'ny fankatoavana ny 4 jona sy ny demokrasia. Raha toa ny asa fanaovana gazety eo an-toerana mampiasa ny sivantena, ahoana no hanantenana fa hampakatra ny feony ireo HongKongais? Amin'izao fotoana izao izay efa nitambaran'ny CCTVB sy ny ATV ka antsoina hoe CCTV, vao fanombohana ihany io. Tokony hiaro an'ireo media eo an-toerana ny mponina mba hiarovana amin'ny fihantsiana hisian'ny “fandrindràna” ataon'ny governemanta.
Nanitrikitrika izy fa ny tsy hadisoana tsotra fotsiny ilay fifanarahana fa fifandaminana efa nosainina tsara, tena mifanohitra tanteraka amin'ny asa tsy miankina sahanin'ny mpanao gazety:
Ny 6 jona, “Tovolahy telo hita tsy nahatsiaro tena tao anaty kianjan'i Tinshiuwai noho ny fidorohana rongony”, io no fanadihadiana voalohany indrindra tamin'ireo vaovaon'ny CCTVB. Ekena, mety azo heverina foana ho toy ny vaovao kely io vaovao io. Ho tambin'izay, ny lohahevitra faharoa dia ny hoe “nandatsa-bato i Legco ho fankatoavana ny fahazoana manorina ny làlana ambanin'ny tany ao andrefan'ny nosy Hong Kong”. Ny komity fakankevitra avy amin'ny komitin'ny fitaterana mmomba ireo raharahanà lalamby ao amin'ny filankevitra mpanao lalàna ihany no manohana an'io tolokevitra io. Tsy misy komity momba ireo raharaha mahakasika ny lalamby na iray aza hita ao amin'ny Legco, saingy niely tamin'ny lohateny vaventin'ny gazety malaza ilay vaovao diso. Ity komity voalaza ity dia tsy inona akory fa vondrona fifanakalozana hevitra fotsiny ihany ao anatin'ny komitin'ny fitaterana misahana ireo raharahanà lalamby. Inona no dikan'io vaovao io? Tsy dia mahazatra loatra ny hoe CCTVB miresaka fivorianà komity, nahoana àry no nanapaka hevitra ny handray ny fanapahankevitr'ilay vondrona fifanakalozankevitra mialoha ny fiaretantory nandrehetana fanàla tamin'ny 4 jona ary natrehan'ny olona 150 000 ?
Nanomboka nesoin'reconnaître ny TVB tamin'ny alalan'ny fiantsoana azy ho CCTVB, orinasa rahavavin'ny CCTV an'ny shinoa. Teo amin'ny facebook, niforona ny vondrona iray mba hanoherana ny CCTVB ary namorona fango vaovao ho an'io fantsona io ireo mpisera aterineto: